Soo-saaraha giraanta Shiinaha ee Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Ruiyi
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee giraangiraha giraantu waa awooddooda ay ku soo jiidan karaan sinnaan la'aanta dhulka si ay u siiso safar fudud, ka madaxbanaan boodbood iyo gariir.
Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay marka la rarayo xamuulka xasaasiga ah.
Marka loo adeegsado tandem-ka tuubbada, giraangiraha sambabada waxay leeyihiin faa'iidooyin muhiim ah, oo ay ka mid yihiin:
Awoodda xamuulka waaweyn. Giraangiraha giraangiraha ayaa caan ah, codsiyada warshadaha sababtoo ah awooddooda xamuul badan.
Tayo wanaagsan, wax ku ool ah oo fudud, awood qaadid ballaaran, nolol adeeg dheer, kulan habboon.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu badan ee Giraangiraha waa awooddooda si ay u soo nuugaan kala duwanaansho la'aanta dhulka si ay u siiso raacitaan sahlan, oo ka madaxbanaan boodbood iyo gariir.
Tani waa gaar ahaan muhiim ah markaad rarto xamuul xasaasi ah.
Waxay u oggolaadaan gaadiid fudud oo mashiinno waaweyn ama culus culus dhul kala duwan.
Heer sarenuugid naxdin. Waxaa lagu yaqaanaa awooddooda gaadiid siman, giraangiraha sambabada ayaa ah xulasho weyn marka la rarayo waxyaabo jilicsan ama jilicsan.
Ku shaqeynta si ku filan gudaha iyo dibaddaba, giraangiraha giraangiraha ayaa awood u leh inay soo nuugaan qadar ka badan naxdin ka badan kuwa kale ee daaraha.
Kartida. Isku-darka astaamaha nuugista shoogga iyo qaababka tuman ee la heli karo ayaa ka dhigaya giraangiraha sambabada oo shaqeynaya. Waxay u adkeysan karaan sagxadaha kala duwan ee bannaanka halka ay weli siinayaan gaadiid fudud.
Yaraynta sawaxanka. Sawaxanka waxaa loo qaddarin karaa inuu yahay arrin khatar ku ah goobo badan oo shaqo, sidaa darteed awoodda xamuulka xamuulku si aamusnaan leh ayay uga dhigeysaa giraangiradeenna hawo-mareenka xulasho weyn.
Halka faa'iidooyinkaof Rubber wheel way ka miisaan culus tahay, waxaa jira dhowr arrimood oo ay tahay in la xuso. Faa’iido darrada ugu weyn ee giraangiraha giraangiraha waa halista daloolinta.
Lugaha Pneumatic-ka dhaqan ahaan waxay ka kooban yihiin hawo caag ka buuxdo, si kastaba ha noqotee, hadda ma jiraan barxad-caag ka buuxsan oo giraangir ah oo yareynaya halistaas.
Khatar kale oo kale oo la xiriirta Giraangiraha waa suurtagalnimada kordhinta tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, hase yeeshe, tan waxaa si fudud lagu xallin karaa iyadoo la kordhinayo leedhka wareega.
Qaabka Flat Bilaash ah
Lambarka Moder 110
Waxyaabaha Rubber Thermoplatic Dib loo warshadeeyay
Magaca badeecada Giraangiraha
Codsiga Soo saarida badeecooyin kala duwan oo caag ah
Nooca Taayirada Style Wheels
Goobta Asalka Qingdao Shiinaha
Xirmo Boorsado / Feedhsan
Waqtiga dirida 3Days
Shaqaynta Saliida iska caabbinta iska caabbinta biyaha iyo kuwa aan siibiqsan
Gawaarida gawaarida qaar.
Xulista wheel caag ah iyo kaydku waa mid muhiim u ah si hufan oo wax ku ool ah u dhammaystira shaqooyinka qaarkood.
Iyadoo aan la helin astaamaha saxda ah, casters-kaada ayaa waxyeelo soo gaari kara ama la'aanta amniga loo baahan yahay.
Si looga fogaado dhibaatooyinka, had iyo jeer waxaan hiigsaneynaa inaan si dhow ula shaqeyno macaamiisheenna si aan u hubinno inay sameynayaan xulashada saxda ah ee qeexitaanka codsigooda loogu talagalay.
Giraangiraha waa xulasho caan ah codsiyada soo socda:
Nidaamkayaga rooga ah ee caagga ah wuxuu noqon karaa loo habeeyay.
Qabsashada wanaagsan, ma fududa in la siibto, dhar badan u adkaysta, waxqabad raaxo leh.
Waxaan rajeyneynaa inaad noqotid midda soo socota ee qodobka soo saaraysa.
Codsiga Soo saarista badeecooyin caag ah oo kala duwan
Waxyaabaha Rubber Thermoplastic, Caag dib loo warshadeeyay
Hore: PU wheel
Xiga: Qaad wiishka dayactirka gaariga
Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Shiinaha Mashiinka la taaban karo, PU Wheel, Shiinaha PU xumbo Wheel, Gawaarida Caster, Shiinaha PU Wheel,